मिडिया – Page4– MySansar
आज बिहान यसो फेसबुक स्क्रोल गर्दै थिएँ, एक जना guy ले गाई सम्बन्धी समाचार सेयर गरेको रहेछ, टक्क आँखा त्यसैमा अडियो। शीर्षक आकर्षक थियो- ‘एउटै गाईबाट २८ लाख आम्दानी !’ जेपिटी नामका फेसबुक पेज र वेबसाइटले सेयर गरेको भए वास्ता गरिन्नथ्यो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको इकान्तिपुरमा आएको न्युज रहेछ। के रहेछ भनेर हेर्न मन लागिहाल्यो। पत्रकारले… Continue reading
हुँदै नभएको कुरा लेख्दा पनि माफी नमाग्ने नेपालका दुई मिडिया
Posted on June 5, 2021 by Salokya
बेलायतको एउटा ट्याब्ल्वाइड अखबार डेली मेलले कोरोना भाइरसको नेपाल भेरियन्ट भनेर सनसनीपूर्ण समाचार लेख्यो। यसको खण्डन नेपाल सरकार र डब्लुएचओको नेपाल कार्यालयले समेत गर्‍यो। यो कुरा त तपाईँहरुले थाहा पाइ नै सक्नुभयो होला। हाम्रो फ्याक्टचेक पनि छ यो विषयमा यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्। बेलायती मिडियालाई मात्र के उडाउनु, नेपाली मिडिया पनि कम्ताको छ र। आज… Continue reading
आफूलाई राष्ट्रिय दैनिक दावी गर्ने पत्रिकाहरु दिनमा कति छापिन्छ? यो एकदमै गोप्य विषय हो। प्रेस र प्रकाशकबीच यति गोप्य रुपमा कोड भाषामा यो अङ्कबारे ‘कम्युनिकेसन’ हुन्छ कि विश्वविद्यालयमा ‘कम्युनिकेसन’ पढेकाहरु ट्वाँ पर्न बाध्य हुन्छन्। विज्ञापनदाताहरुका लागि उनीहरुले यति छापिन्छ, उति छापिन्छ भनेर दावी त गर्ने गर्छन्, तर त्यो अङ्क निकै नै बढाइचढाइ गरिएको हुन्छ। खासमा… Continue reading
भाइरल डाक्टरका स्टायटस कपिपेस्ट गर्ने मिडिया र मिडियाकर्मीले ध्यान दिन नसकेका यी तथ्य
Posted on May 12, 2021 May 12, 2021 by Salokya
“आगामी ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था छ… यसपटकको कोरोना भाइरसको प्रजातिलाई नजरअन्दाज नगरौं” मंगलबार साँझ ५ बजेर ६ मिनेटमा रवीन्द्र पाण्डेले लेखेको यो फेसबुक स्टायटस बुधबार राति अबेर मैले यो ब्लग लेख्दासम्म एक हजारभन्दा बढी पटक सेयर भइसकेको छ। पाण्डे सेलिब्रिटीहरुका पनि प्रिय हुन्। उनको स्टायटसलाई ‘डा. रवीन्द्र समीरका अधिकांश सुझाव, जानकारी र… Continue reading
एक श्रमजीवी पत्रकारको पीडा- काम गरेको तलब लिन के गर्नुपर्ने हो?
Posted on May 7, 2021 May 7, 2021 by Salokya
-राजकुमार गजुरेल- अन्ततः मैले पनि हिजो सामान्यतया लेखिरहन आवश्यकै नहुने व्यक्तिगत कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ। पहिले यस्तै खालको कुरा कसैले लेख्दा के गर्‍या होला है यस्तो, किन सार्वजनिक रुपमा लेख्नुपरेको, कानुनी उपचार खोज्दा हुन्छ नि भन्ने लाग्थ्यो। हिजो उकुसमुकुस भएर सहनै नसकी मैले झण्डै दुई वर्ष काम गरेको संस्था नागरिक दैनिकको बारेमा लेख्न पुगेँ। आफूले… Continue reading
“त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिजको उपाधि जितेको नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई सरकारले जनही ४ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। के हिजो तपाईँले यस्तो समाचार पढ्नुभएको थियो? पढ्नुभएको भए विश्वास पनि गर्नुभएको थियो होला। तर सरकारले होइन, मिडियाले मात्रै दिएको रहेछ क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कार। सरकारले फुटबल खेलाडीलाई दिएको, मिडियाले क्रिकेट भन्ठान्यो। मिडिया आफू मात्रै झुक्किएन, समाचार लेखेर त्यो… Continue reading
मिडिया र एयरलाइन्सलाई कति हतार भा’को, आफै राख्‍दिन मिल्छ र प्रदेश १ को नाम?
Posted on April 18, 2021 April 18, 2021 by Salokya
नेपालका सात प्रदेशहरु मध्ये बाँकी सबैको नाम राखिसकियो। तर अझै पनि नाम राख्‍न बाँकी प्रदेशहरु प्रदेश १ र प्रदेश २ हुन्। चुनाव भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि नाम नराखेकोले औडाहा भएर हो कि के हो, आज केही अनलाइन मिडिया र एयरलाइन्सले मिलेर प्रदेश १ को न्वारान गरिदिए। कति रमाइलो के! सरकारले राख्‍न नसकेको नाम यताबाट… Continue reading
तीन दिनमा खुस्कियो ‘रअ’सितको भाइरल ‘सहमति’को पोल, माफी माग्दै धमाधम हटाइए समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर प्रमुखसित चार बूँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको दावी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको पत्रको पोल तीन दिनमै खुलेको छ। यो पत्रसहितको पहिलो ‘समाचार’ बनाउने उज्यालोनेटवर्कले माफी माग्दै भूलसुधार भन्दै समाचार हटाइसकेको छ। साभार गर्ने अरुले पनि धमाधम हटाउन थालेका छन्।
दोलखा : लोकल न्युजमा अज्ञात रोग, ‘कान्तिपुर’मा रुघाज्वरो, खास भएको के?
दोलखाबाट सञ्चालित भिलेजखबरमा बिहीबार (वैशाख २, २०७८) एउटा आतंकित बनाउने खबर आयो। शीर्षक थियो- ‘अज्ञात रोगबाट दोलखाको एकै विद्यालयका एक सय बढी विद्यार्थी तथा शिक्षकहरु बिरामी’ यस्तो अज्ञात रोगको आतंक नेपाली मिडियाले निकै मच्चाउँछ। केही कुरा रिपोर्टरलाई वा छाप्ने सम्पादकलाई थाहा भएन कि ‘अज्ञात रोग’। त्यति लेखेपछि खोज्न पनि परेन। खोज्ने झण्झट कसले गरिरहोस् !… Continue reading
हिजो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर भएको दावी गरिएको पत्र छाप्‍ने अनलाइनहरुलाई प्रेस काउन्सिलले २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र काटेको छ। यो पत्र किन शंकास्पद छ भन्ने बारे मैले हिजो ब्लग लेखेको थिएँ, छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। यो पत्र राख्ने उज्यालो नेटवर्क, सुदर्शनखबर, पर्दाफास, समाचारदैनिक, नेपालीगाथा, पिएलएखबर, कान्तिपथ डट… Continue reading
अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आईडब्ल्यूओसी) पुरस्कार खासमा अमेरिकी सरकारले दिने हो। तर यसपालि नेपाली मिडियाले बाँडेछ। पत्याउनु भएन? पख्नुस्, म पत्याउने गरी बुझाइदिन्छु। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा मार्च ८ तारिखमा यो पुरस्कार दिने गर्छ। सन् २००७ मा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कन्डोलिजा राइसले सुरु गरेको यो अवार्ड पाउनेमा यसपालि पहिलो पटक नेपालीले पाइन्। किशोरी… Continue reading
के ओली पक्षमा लाग्ने सयौँ निर्वाचितको पद भकाभक रिक्त भइहाल्ने हो र?
Posted on March 3, 2021 by Salokya
आजको कान्तिपुरको तेस्रो पेजमा ‘सयौं निर्वाचितको पद रिक्त हुने जोखिम’ शीर्षकको समाचार छापिएको छ। समाचारको टिजरमा लेखिएको छ, ‘दाहाल–नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा गरेको बहुमतको दाबी सही ठहरिए ओलीपक्षीय संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मको पद धरापमा पर्नेछ।’ समाचारको लिडलाइन यस्तो छ- ‘केन्द्रीय समितिलाई मात्रै आधार मानेर नेकपा विवादको छिनोफानो गरिए अल्पमत… Continue reading
कान्तिपुरको समाचारमा दावी गरिए जस्तै संविधानविपरीत (गैरसंवैधानिक) नै हो र यो?
Posted on March 2, 2021 March 2, 2021 by Salokya
आजको राष्ट्रिय दैनिक ‘कान्तिपुर’ को पेज ४ मा एउटा समाचार छापिएको छ जसको शीर्षक छ- सिनामंगलको जग्गा लिजमा दिनु अधिग्रहणको शर्तविपरीत। फागुन १६ गतेदेखि ‘कान्तिपुर’ले यो विषयमा निरन्तर समाचार लेखिरहेको छ। १६ गतेको शीर्षक छ- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेवैको ९१ रोपनीमा होटल बनाउन दिने तयारी’ उपशीर्षक छ- ‘सुरक्षा संवेदनशीलताको बेवास्ता गर्दै सरकारी जग्गा भाडामा दिन लागिएकामा… Continue reading